Ingabe Mafia 3 Mayelana To Be umemezele? (IZINDABA)
Thwebula zakamuva Gothic 3 cd generator key and zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd ....
DriverScanner 2014 - Khulula Thwebula
Sawubona abadlala, iqembu lethu ezwa Farming Simulator 2015 CD Key Generator ...
Thwebula Khulula Diablo III Reaper of Souls pc umnyuziki, xbox futhi PlayStation aqhephukile umdlalo ....
Thwebula Batman Arkham Knight cd generator key ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho ....
60 Seconds CD Free KEY (Game Keygen) 2015
Sinethulela brand-new and ngcono 60 Seconds Generator Ithuluzi Key ...
Emigodini 2 Steam Key Generator 
Thwebula emigodini zakamuva 2 umkhiqizo generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Thwebula yakamuva The Last Guardian ukhiye cd generator zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd ....
Farming Pure 17 CD Key Generator (Keygen)
Thwebula zakamuva Farming Pure 17 umkhiqizo cd generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Conan bedingisiwe CD Key Generator 2017
Hey, gamers ingabe ukulungele ukuba ukhiqize siqu Conan bedingisiwe CD Key yakho for ngokuphelele free? With Conan bedingisiwe CD Key Generator ...
FIFA 16 CD Key Generator ukubuyekeza
abadlala Siyakwamukela, iqembu lethu ikhombe FIFA 16 CD Key Generator ...
NBA 2K17 Mahhala Ukuqalisa Keys
Ingabe ufuna NBA 2K17 Mahhala Ukuqalisa Keys? NBA 2K17 ukhiye ukusebenza generator sevisi yakamuva etholakalayo nasemoyeni ...
Posted in Izindaba	2015-07-01
Sekuyiminyaka eminingi kulokho sesibonile entsha Mafia video game. Evulekile emhlabeni gangster isihloko sokugcina bayeka nge Mafia 2 indlela emuva 2010. Kubonakala sengathi kufaneleka ukuba mhlawumbe Take-Two and 2K Imidlalo kuzodingeka okuthile esitolo abadlali unikezwa ukungakukhathaleli ukuba 5 iminyaka ngaphandle Mafia iziqu ezintsha. Lokho kungaba ezidunga nge entry entsha kungenzeka series.Over ethandwa on NeoGaf kukhona ukubonisa intambo ukuthi Take-Two, umzali ukufaka 2K Imidlalo, nje usanda wathenga kwezizinda Mafia3TheGame.com, MafiaIIITheGame.com, MafiaThree.com and MafiaThreeTheGame.com.
NeoGaf wathola ushintsho phezu kwi website Daily Changes domain kumadivayisi, lapho sikhumbule ukuthi Take-Two waqale wenza ukuthengwa umsebenzi igama leseva back on June 25, izinsuku nje ezimbalwa emuva.
Kubonakala nje kancane uyinqaba ukuthi ngabe ubhalisele 4 emikhakheni hhayi nje ukukhetha MafiaTheGame.com domain evamile? Imidlalo Namuhla iningi isiqophi ababhekene a franchise umane unamathela igama single. Solutions like Capcom isibonelo uye wagxilisa nje usebenzisa ResidentEvil.com esikhundleni amagugu zezibalo kwalokho. Ngisho Activision uye wakugwema uqwashile izinombolo kanye engezansi egameni domain futhi empeleni iye yanquma ukuba abantu nje ngqo CallofDuty.com for Call of Duty imidlalo.
Empeleni, esimweni ezithile Call of Duty kwakungekho yake izimo lapho omunye uthenge up Call eminingi of Duty zizinda emzamweni ukuthola Activision ukukhokhela kubo for the ezizindeni. Yes, kwaba domain nokuzikhulula futhi obuzama bazwiswe Activision aphume ezinye cointo enze uzuza ezinye on nokuzikhulula sathi.
Nokho abuyele Mafia … kwaba okwamanje babecabanga owayesishushisa ngaphambili ukuthi 2K kufanele sivuselele uchungechunge. Kuba uchungechunge ikhathazeka kakhulu nge style ejulile futhi abacebile nqgo isiko gangster ngasekuqaleni kwekhulu lama-20. Umdlalo wokuqala eyayibekwe kulo lonke 1930 futhi umdlalo wesibili bawenza nge setting ayehlanganisa oneminyaka engu-40 futhi 50s.
The Mafia nemidlalo eminingi yayenzelwa izihloko evulekile-jikelele efana Grand Theft Auto Nokho babengesibo sasivumela njengoba satirical noma ngokweqile. Intambo yokuqala isiqophi mdlalo sasivumela iqonde lizwakalise walunziselela copycats like EA The Godfather. Mafia II wathatha izinto isinyathelo ngisho nangokwengeziwe ngokwenza umuzi omkhulu nakakhulu, kokuba indaba wamboza zinganekwane enamatshana of a mobster lokuzama landa ngamandla futhi bagxile yobudala thematic we oneminyaka engu-40 futhi 50s, bamane emva kwempi.
Ziningi kakhulu abadlali baye baveza intokozo mayelana kungenzeka a 3rd Mafia isiqophi imidlalo ngenxa yokuthi ubuchwepheshe lanamuhla kubonisa ukuthi 2K Imidlalo can izinto isinyathelo ngaphezu kuka kahle ukuthi kufinyelelwa yesibili video game. Ukuthi threequel empeleni imisebenzi ihlala ukuze kubonakale, kodwa thina a okungenani aqonde ukuthi Take-Two Imidlalo zikuvikele kakade amawebhusayithi isihloko kanye cishe yokuhlaziya izimpendulo kulo core pc yokudlala imiphakathi ukuze ubone ukuthi noma cha abadlali bonke isethi for the lobugebengu komhlaba isihloko ukwenza look on the eighth- gen aduduze.
Tags: all about mafia 3 game, mafia 3 Umemezele, mafia 3 game entsha, mafia 3 Izindaba, Mafia III